CBD Kaaliye ahaan Melatonin • Dawooyinka Inc.eu
Dhibaatooyinka dhinaca hurdada melatonin way badan yihiin. Madax xanuun, shuban iyo wadnaha oo istaaga ayaa ah astaamaha qaar ee dadku la kulmaan markay isticmaalayaan dawada. Si kastaba ha noqotee, waxyeeladaan badanaa laguma sheegaayo waraaqda xirmada.
Xarunta waxyeellada dhinaca kale ee Lareb waxay heshay 181 warbixinnood oo ku saabsan waxyeelada aan lagu xusin waraaqda xirmada ee soo-saareyaasha. Melatonin waa hormoon jidhka ka soo baxa. Qiyaasta ka sarreysa 0,3 milligram maalin kasta, daawo ayaa jirta. Kaniiniyada qaadashada daawada hoose waxaa ku jira sharciga badeecooyinka oo si xor ah ayaa looga heli karaa dukaamada dawooyinka
Lareb waxay warbixinada ugu gudbisay hay'adda kormeerka caafimaadka iyo dhallinta (IGJ) iyo Hay'adda Badbaadada Cuntada iyo Adeegga Macaamiisha (NVWA). Dhawaan waxay go'aansadeen inay xoojiyaan kormeerkooda alaabada melatonin.
CBD sidii hurdo hurdo
Alaab u dhigma oo sanadihii ugu dambeeyay caan ka noqday isla markaana si balaadhan looga isticmaalay dhibaatooyinka hurdada cannabidiol. Maandooriyaha ayaa laga helaa xashiish ama haramaha, laakiin ma aha fal-nafsi ahaan sida tetrahydrocannabinol (THC). Maadadu waxay aad ugu egtahay maaddooyinka jirka u gaarka ah waxayna ku shaqeysaa nidaamka cannabinoid-ka jirka, kaasoo saameyn ku yeesha habka difaaca jirka, garashada shaqada iyo xakameynta mootada (Jellinek). Tani waa sababta malaha CBD wax ku ool noqon kara cabashooyinka caafimaad oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka hurdada.
Nasiib darrose, caddeynta sayniska weli lama dhammaystirin, laakiin waxaa jira cadaymo badan oo isdaba-joog ah oo muujinaya in CBD ay saameyn aad u wanaagsan ku leedahay dhibaatooyinka hurdada. Waxaa intaa sii dheer, warbixinnada saameynta taban ee taban waa nil haddii aad barbardhigto maaddo sida melatonin. Markaa iskuday. Waxaad ugu qaadan kartaa qaab ah saliid cbd, edibles ama tusaale ahaan cabitaannada sida shaaha cbd.
Dhawr sano ayaa laga joogaa markii ay CBD suuqa soo gashay. Waqti la'aan ...